မန္တလေးဂေဇက် ပုံနှိပ်သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း (၂၀၁၂ ဇွန်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » မန္တလေးဂေဇက် ပုံနှိပ်သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း (၂၀၁၂ ဇွန်)
မန္တလေးဂေဇက် ပုံနှိပ်သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း (၂၀၁၂ ဇွန်)
Posted by kai on Jun 9, 2012 in Editor's Notes | 10 comments
အဖမြန်မာပြည်၏နိုင်ငံရေးသည် လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရွေ့လျှားတက်ရောက်လာပြီဖြစ်ပေရာ ပါတီစုံစနစ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ လက်ဝဲလော၊လက်ယာလော၊အလယ်လော၊ ခွဲခြားကွဲပြားကြရမည့်အချိန်ရောက်လာပြီဟု ထင်ပါသည်။
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်ပါတီကြီး ၂ခုနှင့် သူ၏ခေါင်းဆောင်များတို့၏စိတ်သဘောမှတ်ချက်နှင့် တည်နေရာတို့ကို သတ်မှတ်ပေးသင့်သည့်အချိန်ဟု ပြောလိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးရည်ညွှန်းတည်နေရာကို ရှာလိုပါသည်။
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေး(၁၇၈၉)သည်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်တို့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ စက်ရုံကြီးဖြစ်သည်နှင့်အညီ လက်ဝဲ[လစ်ဘရယ်(လွတ်ကင်းစွဲ)နှင့် လက်ယာ[ကွန်ဆာဗေးတစ်(ရှေးရိုးစွဲ)]တို့၏ မူလအခြေခံစတည်ရာလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ဝ၊ဲလက်ယာဟူသည် ထိုစဉ်က ပြင်သစ်ပါလီမန်တွင် သမ္မတ၏လက်ဝဲဖက်နှင့်လက်ယာဖက်ခွဲထိုင်သူများကိုကြည့်ပြီး ခေါ်ခြင်းဖြစ်၏။
လွယ်ကူရှင်းလင်းသော စာတတန်းဖြင့်ခြုံရေးပြရလျှင် (Far left-Left-Center left-Center-Center right-Right-Far right) One-Dimension သာဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်ကမ္ဘာအနှံ့အသုံးပြုခေတ်စားလာနေသော လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်မှကြည့်ပြောပါလျှင် လက်ဝဲစွန်းယိမ်းလွန်သွားလျှင် ကွန်မြူနစ်ဖြစ်၍လက်ယာစွန်းနင်းလျှင်ကား ဖက်ဆစ်ဟုဆိုကြပါသည်။
ရှုပ်ထွေးသော ညွှန်းဆိုဟန်(Two-Dimension) ဖြင့်ပြပါမူ လက်ဝဲလက်ယာတွင် အပေါ်(Authoritarian)အောက်(libertarian)ဟူ၍လည်းရှိသည်။ ချန်ခဲ့ပါဦးမည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် နိုင်ငံရေးစနစ်တွင် လက်ဝဲဖက်၌ progressives, social liberals, greens, social democrats, socialists, communists, and anarchists. တို့ပါဝင်၍လက်ယာဖက်တွင်ကား conservatives, reactionaries, capitalists, monarchists, nationalists, and fascists.တို့ထည့်ထားပါသည်။
လစ်ဘရယ်နှင် ကွန်ဆာဗေးတစ်တို့သည် လူမှုဆက်ဆံရေး။ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှု။ငွေကြေးဆိုင်ရာအမြင်။ကာကွယ်ရေး၊အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပေါ်လစီ။Gayအပေါ်အမြင်၊အမြတ်ခွန်၊တရားရေး။စီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေး စသည်တို့တွင် အမြင်နှင့်အဆုံးအဖြတ်လုံးဝမတူညီကြပါ။ ရုပ်ပုံစံဖြင့်ပြရပါမူ ဆန့်ကျင်ဖက်သဏ္ဍန်ဖြင့်
ယခုခေတ်အမေရိကနိုင်ငံရေးနှင့်နှိုင်းပြောလျှင်မူ လက်ဝဲယိမ်းသည် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(အပြာ)ကိုညွှန်းဆို၍ လက်ယာယိမ်းသည် ရီပါ့ဗလစ်ကင်န်ပါတီ(အနီ)ကိုညွှန်းကြလေသည်။
အခြေခံအားဖြင့်မူ ပါတီကြီး၂ခုလုံးသည် လက်ယာယိမ်းများဖြစ်ခဲ့ကြပြီး Democratic-Republican Party (founded in 1791) မှခွဲပြားထွက်လာသော ပါတီကြီး၂ခုသာလျှင်ဖြစ်၏။ ယူအက်စ်၏ နိုင်ငံရေးစံနစ်တွင် ဘယ်ညာဖြင့် နိုင်ငံရေးကို အခြေကျကျလမ်းညွှန်ခွဲထားပေရာမိမိ၏ရပ်တည်။ ရောက်ရှိ။ ဖြစ်တည်နေရာတို့အတွက်တိကျချက်ရှိသည်ဟုဆိုချင်ပါသည်။
The Economist ၏ ၂၀၁၁ Pollရလဒ်အရ လက်ရှိသမ္မတအိုဘားမားသည် အလယ်စွဲဖြစ်သည်ဟုဆိုထားကြသည်။ လက်ရှိ လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းကို သဘောတူပြီးသည်နောက်ဝယ် လက်ဝဲဖက်ယိမ်းလာသည် ဆိုကြပြီး ကွန်ဆာဗေးတစ်တို့ကမူ အိုဘားမားသည် လက်ဝဲစွန်းရောက်သူ (Far left – လွတ်ကင်းစွန်းစွဲ)ဟုပင်ခေါ်ကြပေသည်။
ရီပါ့ဗလစ်ကန်ပါတီမှ ၁၉၈၁-၈၉သက်တန်းတွင်သမ္မတဖြစ်ခဲ့သူ ရော်နယ်ရီဂင်သည် ကွန်ဆာဗေးတစ်တဦးဖြစ်ပြီး ဘယ်မှညာသို့ကူးသွားသူ ဖြစ်သည်။
အမေရိက၏နိုင်ငံရေးစံနစ်သည် လက်ဘရယ်နှင့်ကွန်ဆာဗေးတစ်အားပြိုင်ရုန်းကန်ရင်းမှ မတူညီသည်များကိုဒီမိုကရေစီအရ မဲခွဲဆုံးဖြတ်၍အတူညီဆုံးညှိယူရင်း ခေတ်နှင့်အလျှော်ညီဆုံးဖြေရှင်းမှုများကို မွေးဖွားစေသည်ဟု သုံးသတ်လိုပါသည်။
နိုင်ငံ့အရေးလုပ်နေသူတို့အား မိမိယုံကြည်ရာ ပူးပေါင်းလိုဟန်သည့် အုပ်စုအလိုက်အမည်တပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းပြုသင့်ပါသလော။
လူသားသည် သဘာဝအလျှောက်အုပ်စုဖွဲ့တတ်ပေရာ အစုအဖွဲ့သီးသန့်ထားအမည်တပ်လိုက်ခြင်းသည် သဘောညီမျှသူရှာဖွေရလွယ်စွာဖြင့် စုစည်းအင်အားစစ်ကို ရစေသည်လည်းဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ဖြင့်နေရာရပ်တည်မှုအတိအကျရရှိခြင်းသည် မိမိ၏ န်ုင်ငံရေးရပ်တည်မှုကို ဖွင့်လှစ်ပြနေခြင်းဖြစ်၏။ မိမိနှင့်မိမိကိုထောက်ခံကန့်ကွက်သူများအတွက် စိတ်သဘောလမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြနိုင်သော လမ်းပြသံလိုက်အိမ်မြောင်သဖွယ်လည်းဖြစ်ပါသည်။
လူသားတဦးသည် မိမိယုံကြည်ချက်အလိုက် ရပ်တည်ရာနေရာကို ကျောက်ချသတ်မှတ်ထားရမည်မရှိပါ။ ရွှေ့နိုင်ရှားနိုင် ရွေ့သင့်ပြောင်းသင့်ပါ၏။
သို့ဖြစ်၍ မိမိအားအခြားသူများက နိုင်ငံရေးတည်နေရာအမည်တတ်လျှင် မမှန်ကန်ပါကငြင်းချက်ချရှင်းပြရန်နှင့် မှန်ကန်ပါက ထိုနေရာခိုင်မြဲရပ်တည်ရန်သာရှိသည်ဟုဆိုချင်သည်။
သို့သော်.. အစွန်းရောက်နိုင်ငံရေးသမားများတို့သည် မိမိတို့၏ရပ်တည်မှုနေရာကို “မှောက်ကွယ်ဖုံးဖိ”လိုချင် ရှိပေလိမ့်မည်။ တဖက်သားကို “ထိုးခွဲသပ်လျှို”လိုစိတ်ရှိပေလိမ့်မည်။ ထိုစိတ်တို့ကပင် ထိုသူအား “သင်းကွဲထောင်”တွင်းသို့ ကျစေပေလိမ့်မည်။ မရိုးသားသူနိုင်ငံရေးသမားများဟု ဆိုချင်သည်။
ပွင့်လင်းမြင်သာသော အစိုးရနှင့်နိုင်ငံရေးစနစ်အလိုရှိမှုတို့ တောင်းဆိုမှုများနေချိန်တွင် နိုင်ငံရေးသမားသည် မိမိ၏လက်သည်းများအားဖွက်ထားရန်မလိုဟုသာမြင်မိပါသည်။
ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ မိမိလက်များကို ထုတ်ပြထားသော နိုင်ငံရေးသမားများ အလိုရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကတဦးချင်းစီသည်လည်း မိမိတည်နေရာသိလိုလျှင် အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တို့တွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသတ်မှတ်ရယူနိုင်ပါသည်။
မြန်မာပြည်မှ ကမ္ဘာတန်းအဆင့် နိုင်ငံရေးသမား ခေါင်းဆောင်တဦးပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီ။ မြန်မာ့သမိုင်းတွင်မရှိဖူးသေးသော အခြေအနေဖြစ်၏။
၁၉၉၁ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင်အား လစ်ဘရယ်လော. အလယ်လော ကွန်ဆာဗေးတစ်လော တွေးကြည့်မိပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လက်ရှိယူအက်စ်၏နိုင်ငံရေးထဲချကြည့်မည်ဆိုပါက လက်ဝဲအလယ်(Center left)တွင်ရှိမည်ဆိုသူလည်းရှိသည်။ အလယ်တည့်တည့် နေရာ(Center)ကျမည်ဟုပြောသူလည်းရှိသည်။ကွန်ဆာဗေးတစ်(Center right)နေရာတွင်ရှိသည်ဟုလည်း ဆိုသူတို့လည်းရှိပါသည်။
အသစ်စလာတော့မည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အလယ်စွဲ(Center)နေရာထားပြီး ခေတ်စနစ်လမ်းပြမြေပုံတခုကို ဆွဲယူနိုင်သည်ဟုထင်မိ၏။
မြန်မာပြည်၏ ရှေးစွန်းစွဲပြင်းထန်သောဘာသာရေးနှင့် သမိုင်းရှည်ကြာသော ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို တည်မှီသုံးသပ်ရလျှင် မြန်မာအများစုကြီးသည် ကွန်ဆာဗေးတစ်(ရှေးရိုးစွဲ) များမည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ရှေးစွန်းစွဲ(Far right) များပင်လွန်ကဲစွာရှိနေနိုင်၏။
မြန်မာပြည်၏လက်ရှိသမ္မတ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးသိန်းစိန်မှာ ရှေးရိုးစွဲကွန်ဆာဗေးတစ်သမားဟု အသေအချာဆိုနိုင်ပါသည်။ အာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်တွင် ရာထူးရှင်သန်ကြီးထွားလာသူဖြစ်သဖြင့် ရှေးစွန်းစွဲ(Far right) အထိနီးကပ်နေသူဟုပင်ဆိုနိုင်လိမ့်မည်။
အမေရိကန်တို့၏ စနစ်သဏ္ဍန်နှင့်နီးစပ်နေသည်ပြောလျှင် အတွေးလွန်၊အမှန်းလွန်နေသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသလား?။ သို့သော်ဤသို့ဖြစ်လာခြင်းသည် တိုးတက်အောင်မြင်သော နိုင်ငံရေးစနစ်နှင့်ထိုစနစ်ကထိမ်းကြောင်းမောင်းနှင်သော စီးပွားရေလူမှုရေးတို့ ဖြစ်လာမည်ဟုကားအသေအချာပြောနိုင်သည်။
ပါတီကြီး၂ခုနှင့်သူ၏ပါတီဝင်များမှ လက်ဝဲစွန်းရောက်လျှင်လက်ယာစွန်းနင်းမည်။ အလည်တည့်လျှင် ၀ဲယာယိမ်းကစားမည်တို့ဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးချိန်ခွင်လျှာကိုထိန်းညှိကစားသွားကြစေလိုသည်။ ကွန်ဆာဗေးတစ်တို့၏ အာဏာရပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ(USDP)အား အတိုက်အခံပြုရန် ပညာတတ် အခြေခံလူတန်းစားပါတီဝင်များသော ဒီချုပ်(NLD)သည် လက်ဝဲဖက်ယိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
သို့ဖြင့် လူထုမြန်မာတို့အကျိုးများ၍ အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံရေး ထွန်းတောက်လာမည်ဟု ထင်မိပါကြောင်း။ ။
မှတ်ချက်။ ။ မန္တလေးဂေဇက် ပုံနှိပ်သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း (၂၀၁၂ ဇွန်)လအတွက်ဖြစ်သည်။
Aနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံရေး ထွန်းတောက်လာမယ် ရွယ်ကာရှိသေး..
Aဘေးတွေ ၀င်ဖျက်လို့ ဖျက်စီးလုပ်ဖို့ တာဆူနေတယ်..
Aခြေနေနဲ့Aချိန်Aခါကိုကြည့်ပြီး ခေါင်းဆောင်များ Aချိန်မီ ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါစေ..
စာတွေကိုတော့ နောက်မှဖတ်မယ်ဗျာ ..
ခု ပုံကိုဒေါ့ အရင် ကြည့်သွားပါတယ် ..
ပုံရဲ့ ဘယ်ဘက် အောက်နားက လူဂျီးက ဂန္ဓီကြီး မဟုတ်လားဗျ ..
အဲ့တစ်ယောက်ပဲ သိဒယ်ဗျို့ …
ပွင့်လင်းမြင်သာသော အစိုးရနှင့်နိုင်ငံရေးစနစ်အလိုရှိမှုတို့ တောင်းဆိုမှုများနေချိန်တွင် နိုင်ငံရေးသမားသည် မိမိ၏လက်သည်းများအားဖွက်ထားရန်မလိုဟုသာမြင်မိပါသည်။ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ မိမိလက်များကို ထုတ်ပြ
ထားသော နိုင်ငံရေးသမားများ အလိုရှိသည်။ ပုဂ္ဂလိကတဦးချင်းစီသည်လည်း မိမိတည်နေရာသိလိုလျှင်
အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တို့တွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသတ်မှတ်ရယူနိုင်ပါသည်။
ကျုပ်ကတော့ အန်တီကြီး သက်ချာကို ကြိုက်သဗျို့……
ကျုပ်တို့ အန်တီကြီးလည်း သူ့လောက် နည်းနည်း မာစေခြင်ရဲ့…ဒါဆို အိုင်းယွန်းအန်တီကြီးပေါ့
ဂန္ဓီကြီး ဘေးက ဘူဒုံးဟင် မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေ အားဂျီးနဲ့ အသဲယားစရာဂျီး ဟီးးးးး :grin:
စိတ်ဝင်စားသူတွေ.. ကိုယ်ကဘာလည်း.. ဘယ်လည်း.. စစ်နိုင်ဖို့ပါ..
အဲဒီလိုဝက်ဘ်ဆိုက်နေရာတွေကနေ.. ကိုယ့်နေရာစစ်လို့ရပါတယ်..။ လစ်ဘရယ်လား.. ကွန်ဆာဗေးတစ်လားပေါ့…
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲဗျ။ဘယ်တော့မှအဲဒီစကားပျောက်မလဲ။ဒါထက် အေးချမ်းသာယာဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်။မူဝါဒထက် လက်တွေ့ကျမှုကပိုအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အခုအချိန် နိုင်ငံရေးသမားအားလုံးက မီးစင်ကြည့်ကတုန်း ထင်ပါတယ်။ လက်ဝဲ လက်ယာစွန်းလို ထင်ရှားတဲ့ လမ်းကြောင်းကတော့ ရှိပြီးသာ ဖြစ်မှာပေါ့လေ.. အဲဒီကနေ ထပ်ခွဲသွားဖို့ကို ကိုယ့်ဖက်မှာ လုံလောက်တဲ့အားရှိမရှိ လေ့လာနေဂျဒုံးလို့ ပြောချင်ဒါဗာ။ ၈၈အဖွဲ့က တနေ့၈ ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာလူမျိုးအဖြစ် လက်မခံလို့ အတိအလင်း ပြောလိုက်ပီ။ အန်အယ်လ်ဒီ အပါအဝင် အခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့များ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေဒယ်။ အစိုးရကလည်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အသစ်အနေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဒါမရှိသေးဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကြောင်းအရတော့ ဆိုရှယ်လစ်အတွေးအခေါ် လူကြိုက်များတယ်။ အခုလည်း ဒီအနေအထား သိပ်မပြောင်းနိုင်ဘူး…ဆင်းရဲတာကိုး။ တိုင်းပြည်ချမ်းသာလာမှ ဈေးကွက်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှ လူတွေ လက်ဝဲအစွန်းအတွေးအခေါ် နည်းသွားမယ်။ နို့မို့လို့ဂဒေါ့ အရင်းရှင် အရင်ရှင်းဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ရှာ အကြမ်းဖက်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ဖြစ်လာမှာဗဲ။ ကျနော့်အမြင်အရ ဒေါ်စုသည် ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်လမ်းစဉ်ကို ကြိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။ သူလမ်းကြောင်းပေးတဲ့အခါမှာလည်း စကင်ဒေးဗီးယားနိုင်ငံတွေကို ဥပမာ နော်ဝေနိုင်ငံ နှစ်ခြိုက်ကြောင်း သိသာတယ်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေး သဘောသဘာဝကို လက်ခံတယ် သို့သော် ငွေတမျက်နှာထဲကြည့်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုးကို အားမပေးဘူး။ ရေရှည်တည်တံ့ အကျိုးရှိမည့် လုပ်ငန်းများကို ကြိုဆိုတယ်။ အရင်းရှင် ကတ်ပီတယ်လစ် တကယ်စစ်ရင် အဲဒါမျိုး သိပ်နှပ်ကြောင်းပေးလို့ မရဘူး။ ဒေါ်စု ဆိုရှယ်လစ်စနစ်လို တင်းကြပ်တဲ့ချုပ်ကိုင်မှုမျိုး လက်မခံတာတော့ သေချာတယ်။ ဩစတေးလျ၊ ဥရောပနိုင်ငံများလို လူမှုဖူလုံရေးမှာ အစိုးရက စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေး၊ ပါတီစုံနိုင်ငံရေးစနစ်သို့ ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်ရှိမယ်လို့ထင်ဒယ်။ ၈၈အဖွဲ့ကတော့ အခုပုံစံအတိုင်းဆို အမျိုးသားရေး နေရှင်နယ်လစ် လက်ယာစွန်းဖက်ကို သွားနေပီ။ သိပ်တော့ အစွန်းရောက်မယ် မထင်ဘူး။ သူတို့ ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ အတွေ့အကြုံပေါ် အခြေခံပီး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ သွားမယ်ထင်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီကြတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်ဆံနေရတော့ သိပ်ဟော့တ်လို့ မရဘူး။ ကြံ့ဖွတ်က ဘာဖြစ်မလဲ။ ဒီကောင်တွေကတော့ အမြီးကျက် အမြီးစား ဂေါင်းကျက်ဂေါင်းစား ရရာပေါက်က တိုးမှာဗဲ။ ကြေးမုံဂျီးကိုဗဲကြည့် ကြောင်ကြီးကို ပြောလိုက်တာများ ရစရာမရှိဘူး။ ကြံ့ဖွတ်တွက အမျိုးသားရေး လက်ယာဝါဒီအစွန်းမှာ နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အဲဒီလမ်းက ချောင်တယ်။ အတွေးအခေါ် မလိုဘူး..နောက်ပီး သူတို့ ခိုးဆိုးလုဝှက်ထားတာတွေက အဲဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ဗဲ သွားလို့ရမယ်။
ဖြစ်စေဂျင်ဒါ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ၈၈အဖွဲ့တို့ ဆိုရှယ်လစ်ဘရယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေး၊ ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်လိုင်းများကို အခြေပြုပီး လိုတိုးပိုလျော့ သွားစေဂျင်ဒယ်။ အရင်းရှင် ကတ်ပီတယ်လစ် စစ်စစ်ကြတော့ သိပ်ကြမ်းလွန်းတယ်။ ဆိုးလွန်းလို့လည်း အိုဘားမားလို လက်ဝဲယိမ်း သမဒ တက်လာတာ မဟုတ်လား။
အော် ချာဗက်ဇ်နဲ့ ဂန်ဒီ နီးစပ်သတဲ့လား